Ku taqasuska Saxaafada
Saxaafada waa taqasus diirada lagu saaro hababka iyo farsamooyinka wax loo soo tabiyo, sida loo diyaariyo barnaamijyada iyo gaarsiinta wark; warkaas oo la marsiinayo raadiyaha, telefishanka, wargeysayada, joornaalka, websiteyada iwm.
Taqasuska saxaafada waxyaabaha lagu barto waxaa ka mid ah, wariyenimo, tifaftirenimo, soo saare barnaamij iyo maamulida warbaahinta. Waxaa kaloo soo raaco barashada mabaadi'da iyo xeerarka warbaahinta, baahin warbixinnada, nidaamka makarafoonka loo isticmaalo iyo tafaftirka codadka, qoraalada iyo muuqaalka.
Arday noocee barta Saxaafada?
Ma jeceshahay inaad mar walba la socotid wararka deg deg ah ama cusub?
Ma xiisaysaa inaad wax u kuurgashid oo aad soo ogaatid?
Ma ku fiican tahay qorida xusuus qor, warqad ama maqaal?
Ma jeceshahay inaad wax ka ogaatid bulshada, meelaha taariikhiga ah iyo fikradaha.
Ardayga Saxaafada barta jago noocee buu qaban karaa?
Xeerka Saxaafada qodobkiisa 18.1 wuxuu u qoran yahay sidaan:
“Qof kasta oo ku shaqaynaya xirfadda saxaafadda waxaa lagu qorayaa diwaanka suxufiyiinta ka dib marka la hubiyo aqoontiisa saxaafadeed, guddiguna ka qaado imtixaanka xirfada saxaafadda waxaana la siinayaa warqadda aqoonsiga suxufiga ka dib markuu ka gudbo imtixaankaas.”